Ọrịa Crohn na ụmụaka na ndị na -eto eto | Bezzia
Maria Jose Roldan | 28/08/2021 13:48 | Ndị na-eto eto, Maka nwa gị
Ọrịa na -ebute afọ na eriri afọ ha na -aghọwanye ihe na -emekarị na -adịkarị n'etiti ụmụaka na ndị na -eto eto. Ihe ndekọ ahụ na -egosi na kwa afọ ọtụtụ ụmụaka na -arịa ụdị ọrịa a, gụnyere ọrịa Crohn.
Ụdị ọnọdụ a nke na -emetụta sistem nri nri, Ọ na -enwe nnukwu mbufụt na akụkụ ikpeazụ nke obere eriri afọ yana mmalite nke nnukwu. N'isiokwu na -eso anyị ga -egosi gị otu ụdị ọrịa a si emetụta ụmụaka na ndị na -eto eto na ihe ndị nne na nna kwesịrị ime maka ya.
1 Ihe na -ebute ọrịa Crohn n'ime ụmụaka
2 Kedu ka ọrịa Crohn si egosipụta
3 Ihe ndị nne na nna nwere ike ime gbasara ọrịa Crohn
Ihe na -ebute ọrịa Crohn n'ime ụmụaka
Ruo taa, ọ nweghị ihe a kapịrị ọnụ kpatara nwatakịrị nwere ike ịrịa ụdị ọrịa afọ a. Enwere ihe dị iche iche dịka nri ma ọ bụ omume ịdị ọcha nke nwere ike ime ka ụmụaka bute ọrịa dị otu a, n'ihi mbelata nke ihe nchebe ha. O nwekwara ike ịbụ n'ihi ihe mkpụrụ ndụ ihe nketa kpatara na akụkọ ezinaụlọ nwata ahụ.
Kedu ka ọrịa Crohn si egosipụta
Enwere ọtụtụ ihe mgbaàmà nwere ike igosi na nwatakịrị nwere ọrịa Crohn:
Afọ ọsịsa bụ otu n'ime ihe na -egosikarị ụdịrị ọnọdụ a. Ọ bụrụ na afọ ọsịsa a na -eso ọbara, ọ ga -ekwe omume na enwere mbufụt na mpaghara eriri afọ. Ọ bụrụ na ọnụọgụ afọ ọsịsa dị oke mkpa, ọ bụ ihe dị mma maka mbufụt ahụ ime na obere eriri afọ.
Ihe mgbaàmà ọzọ doro anya nke ọrịa a bụ ihe mgbu na mpaghara afọ niile.
Ọnọdụ oke ahụ ọkụ.
Enweghị agụụ nke so ya oke ibu ibu.
Enweghị ume na ike ọgwụgwụ n'oge awa niile n'ụbọchị.
Ọdịdị nke ọnya afọ na fistulas.
Nsogbu nkwonkwo inwe ike ibute ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Ihe ndị nne na nna nwere ike ime gbasara ọrịa Crohn
O di nwute na ọ bụ ụdị ọnọdụ adịghị ala ala na enweghị ọgwụgwọ. Nwatakịrị ahụ ga -ebi ndụ ya niile na -arịa ọrịa eriri afọ. A ga -enwe oge ihe mgbaàmà ga -akawanye njọ ma e jiri ya tụnyere oge ndị ọzọ ihe mgbaàmà ahụ dị nro. Ọgwụgwọ nke a ga -eso kwesịrị inwe ebumnuche ibelata mgbaàmà yana inyere nwata ma ọ bụ onye na -eto eto aka ibi ndụ dịka o kwere mee. Mgbanwe n'omume iri nri ma ọ bụ ị certainụ ọgwụ ụfọdụ ha nwere ike nyere aka ịchịkwa ọrịa Crohn.
Na nkenke, Ọrịa Crohn na -etokarị karịa n'oge nwata,Agbanyeghị na data na -egosi na ọtụtụ ụmụaka na -arịa ụdịrị ọrịa a. Banyere ihe mgbaàmà ya, ha na ndị okenye dị ka ụmụaka. Ọ bụrụ na a na -arịa ọrịa a n'oge ntorobịa, ọ ga -ekwe omume na ọrịa ahụ na -akwụsị inwe mmetụta na -adịghị mma na mmepe nwata ahụ na -eto eto. Ndị ọkachamara na -akọwapụta mkpa ọ dị ịkụnye ụmụaka site na nwata, usoro iri nri dị mma iji gbochie ha ịzụlite ụdị ọrịa eriri afọ dị otú ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị na-eto eto » Ọrịa Crohn na ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
Isi nri ibuso ike ọgwụgwụ